How'd it happen and more reports?: ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း
ပြည်သူတွေ အကြွေး ၅သိန်းတင်နေတယ်နော့.... ဆပ်ဖို့တာပြင်ထားကျတော့ !
၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက် ဥပဒေ ပြဌာန်းလိုက်ပါပြီ။
'၀င်ငွေခွန်'အတွက် ထူးခြားချက်များကတော့ -
၁။ မြေ၊ အဆောက်အဦ၊ အခန်း ငှားရမ်းခြင်းများမှ ၀င်ငွေအပေါ် အခြေခံသက်သာခွင့်၊ အိမ်ထောင်ဖက်သက်သာခွင့်၊ သားသမီးသက်သာခွင့်၊ လူမှုဖူလုံရေးကြေးနှင့် အသက်အာမခံကြေး သက်သာခွင့်များ နှုတ်ပြီး ကျန်ငွေအပေါ် ၁၀% ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အတူနေမိဘသက်သာခွင့် တစ်ဦးလျှင် ကျပ်(၁၀)သိန်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်သက်သာခွင့် ကျပ်(၁၀)သိန်း၊ သားသမီးသက်သာခွင့် တစ်ဦး ကျပ်(၅)သိန်း၊
၃။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားရဲ့ လစာမှဝင်ငွေအပေါ် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားများနှင့် တန်းတူ ပေးဆောင်ခွင့်၊
၄။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားရဲ့ လစာမှအပ အခြားဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% (နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ရုံးခွဲများလည်း အကြုံးဝင်ပါသည်)၊
Posted by Ko Nge at Saturday, April 04, 2015
Labels: အထူးသတင်း, ငွေကြေး